Pectus Excavatum (ရင်ညွန့်ရိုးချိုင့်ဝင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Pectus Excavatum (ရင်ညွန့်ရိုးချိုင့်ဝင်ခြင်း)
Pectus Excavatum (ရင်ညွန့်ရိုးချိုင့်ဝင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ရင်ညွန့်ရိုးသည် ရင်ဘတ်ထဲသို့ ချိုင့်ဝင်နေခြင်းဖြစ်ပြီး အခြေအနေဆိုးသောသူများတွင် ရင်ညွန့်ရိုးနေရာတွင် ဇွန်းနှင့်ခပ်ထုတ်ထား သကဲ့သို့ပင် အချိုင့်ရာထင်ကျန်နေတတ်သည်။
Pectus Excavatum (ရင်ညွန့်ရိုးချိုင့်ဝင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ကလေး၁၀ဝဝမှာ တစ်ယောက်တွင်ဖြစ်တတ်ပြီး ယောကျာ်းလေးများတွင် မိန်းကလေးများထက် လေးဆပိုဖြစ်နိုင်သည်။ သိလိုသည်များရှိပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Pectus Excavatum (ရင်ညွန့်ရိုးချိုင့်ဝင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အဖြစ်များသောရောဂါလက္ခဏာမှာ ရင်ဘတ်အနည်းငယ်ချိုင့်ဝင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အချို့လူနာများတွင် ကြီးကောင်ဝင်သည်မှ အရွယ်ရောက်သည်အထိပင် ပိုမိုချိုင့်ဝင်လာနိုင်သည်။
အခြေအနေဆိုးသောသူများတွင် ရင်ညွန့်ရိုးသည် အဆုတ်နှင့်နှလုံးကိုဖိနေနိုင်သည်။ ထိုလက္ခဏာများမှာ-
မကြာခဏ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း
အသက်ရှူလျှင် တရွှီရွှီမြည်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း
Pectus Excavatum (ရင်ညွန့်ရိုးချိုင့်ဝင်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အကြာင်းအရင်း အတိအကျမသိရသေးသော်လည်း တခါတရံ မိသားစုစဉ်ဆက်အလိုက် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသောကြောင့် ရင်ညွန့်ရိုးချိုင့်ဝင်ခြင်းသည် မျိုးရိုးလိုက်သော ရောဂါဖြစ်နိုင်သည်။
Pectus Excavatum (ရင်ညွန့်ရိုးချိုင့်ဝင်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ရင်ညွန့်ရိုးချိုင့်ဝင်ခြင်းသည် ယောကျာ်းလေးများတွင် မိန်းကလေးများထက် ပိုအဖြစ်များသည်။ ထို့ပြင် အောက်ပါရောဂါစုများရှိသောသူနှင့် မွေးရာပါအရိုးဖွဲ့စည်းမှု ပုံမမှန်သည့် ရောဂါရှိသူများတွင်လည်း အဖြစ်များသည်။
Pectus Excavatum (ရင်ညွန့်ရိုးချိုင့်ဝင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရင်ညွန့်ရိုးပြဿနာကြောင့် သင့်ကလေး၏ အသက်ရှူခြင်းကို ထိခိုက်မှုရှိမရှိ သိနိုင်ရန်အသက်ရျူစစ်ဆေးမှုများနှင့် နံရိုးခွင်၏ အတိုင်းအတာအတိအကျကိုသိရန် စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်သည်။
Pectus Excavatum (ရင်ညွန့်ရိုးချိုင့်ဝင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ရင်ညွန့်ရိုးပြဿနာကြောင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုမရှိလျှင် ကုသရန်မလိုပါ။ ရင်ညွန့်ရိုးပြဿနာကြောင့် သင့်ကလေး၏ အသက်ရှူခြင်းကို သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်မှုရှိလျှင် ခွဲစိတ်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pectus-excavatum/symptoms-causes/syc-20355483.Accessed October 13, 2017/
http://www.gosh.nhs.uk/medical-information/pectus-excavatum. Accessed October 13, 2017
Learn about pectus excavatum. What are the symptoms, the causes and how to treat this condition? What can we do to cope and prevent its symptoms?